रमेश ज्ञवाली आइतबार, वैशाख २१, २०७७, ०८:२१
मेरा बा सरकारी स्कुलका हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो। सेवा अवधिले पेन्सन पाउने समय भएपछि मैले एकदिन भनें- ‘बा तपाईंले धेरै दुःख गरिसक्नु भयो, हामी पनि आफैं गरी खाने भयौं। अब रिटायर्ड हुनुस्।‘
उहाँको जवाफ थियो- ‘हेर कान्छा, मेरो स्वास्थ्य अहिलेसम्म ठीक छ। हात खुट्टा चलेकै छन्। पेन्सन निस्के पनि बस्ने यही ठाउँ हो। घर बसेपछि अरुले त के मेरै विद्यार्थीले समेत नमस्तेसम्म पनि गर्नेछैनन्।’
त्यो बेला मैलै के बुझें थाहा छैन। तर, यो जवाफमा अन्तरनिहित धेरै कुरा अहिले बुझ्न थालेको छु।
राजनीतिक, सामाजिक वा प्रशासनमै पनि हेर्नुभयो भने ‘लौ मलाई पुग्यो अब, जिम्मेवारी लिनुस्’ भन्ने एकै जना पनि फेला पार्न हाम्रो देशमा असम्भव प्रायः नै भएको छ।
कांगेस नेता रामचन्द्र पौडेलले केही समयअघि महामारीको मौका पारेर आफूभित्र दबेर रहेको कुण्ठा बाहिर निकाले, अब सहमतिको सरकार चाहियो भन्दै। पौडेलको भनाई कुनै पनि हिसाबमा देशको हितको लागि थिएन। उनलाई लागेको हुनुपर्छ- ७६ वर्ष भइहालियो। यो सरकार रहँदासम्म ८० तिर पुगिन्छ। अहिले भेटिहालियो भने सत्ताको कुनै स्वाद चाखिहालौं। नत्र, यो जुनीलाई अब सक्कियो।
किनभने, पौडेलको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना त पूरा भएन नै, पार्टी सभापति बन्न पनि आफूभन्दा केही वर्ष कान्छा शेरबहादुर देउवाको अवरोध छ। देउवा कुर्सीमा यसरी टास्सिएर बसेको छन् कि दोस्रो पुस्ता त के, चन्द्र भण्डारी, गगन थापा वा विश्वप्रकाश शर्माहरुले सभापति भएर पार्टी हाँक्ने सपना नै देख्न छाडेको हुनुपर्छ।
संसार परिवर्तनको डिङ हाँकेर क्रान्ति गरेका प्रचण्डले अध्यक्षमा दाबी गर्न सक्ने सबैलाई पन्छाउँदै आएर अहिले आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्षसँग प्रधानमन्त्री र एक्लो अध्यक्ष बन्न पैंठेजोरी खेल्दैछन्। केपी ओलीलाई देखाएर चुनाव जितेको नेकपाका धेरै नेताहरु ५ वर्ष ओलीलाई सरकार चलाउन नदिएर आच्छुआच्छु पार्दैछन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि ‘ल म अब बिरामी पनि भएँ, आराम गरेर बाल्कोटतिरै बस्छु तपाईंहरु चलाउनुस्’ भन्ने त कुरै भएन। किनभने, गिरिजाप्रसादले कुर्सी होइन, कुर्सीले गिरिजाप्रसादलाई खोज्छ भने जस्तो छ, सबैको व्यवहार।
त्यही पार्टीकै ६७ वर्ष पुगेका माधव कुमार नेपाल र ७० वर्षका झलनाथ खनाल दुबैले पार्टी र सरकार सञ्चालन गरेर सत्ता र शक्तिको भरमग्दुर प्रयोग गरिसकेका हुन् तर उनीहरु पनि कहाँ अघाएका छन् र? फेरि पार्टी अध्यक्ष, सके प्रधानमन्त्री, हुँदै नभए राष्ट्रपति हुनका लागि अनेक छिर्केदाउ लगाउँदै हिँडेका छन्।
उता, ७० कटिसकेका वामदेव गौतमलाई उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र पार्टीको उपाध्यक्ष भइसक्दा पनि भोक मेटिएको छैन। चुनावमा पराजित भएपछि उनलाई लाज पचाएर संसदमा जानुपर्नै भएको छ। त्यो पनि, जनताले चुनेर पठाएका कुनै एक जनालाई राजीनामा गराएर।
बाजे पुस्ताका यिनीहरुको भोक नमेटिएपछि शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली वा पृथ्वी सुब्बा गुरुङहरुले पार्टी अध्यक्ष हुने चाहना कसरी लिनु? यसो भएपछि रामकुमारी झाँक्री वा नवीना लामाहरु त पार्टीमा सधैं बालखै भइरहने भए, होइन?
अमेरिकाका ४४औं राष्ट्रपति बाराक ओबामाले रास्ट्रपति छोडेको चार वर्ष पुग्न लाग्यो। उनी अझै ६० वर्ष लागेको छैनन्। बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर ४४ वर्षमा प्रधानमन्त्री भए। कार्यकाल पूरा गरे, घर फर्किए। आफ्नो समयमा चर्चित र लोकप्रिय उनीहरु अहिले गुमनाम जस्तै छन्। उनीहरु पार्टीमा फेरि केही पाइहालिन्छ कि भन्ने छिर्के दाउमा छैनन्। सरकारको कुनै ठेक्कापट्टामा वा आफ्नी सासु बज्यैलाई ‘लौ न राजदूत बनाइदेऊ’ भन्दै बिन्ती बिसाउने वा सम्धिज्यूलाई कुनै एउटा नियुक्ति दिलाइदेऊ भनेर हात जोडिरहेका छन्।
त्यस्तो अवस्था हामीले किन कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं?
अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने, फिनल्याण्डमा ३४ वर्षकी सना मरीन प्रधानमन्त्री छिन्। कोष्टारिकामा ३९ वर्षका कार्लोस अल्वार्डो क्वेसाडा राष्ट्रपति छन्। हाइटीमा जिन लापिन २०१९ मा प्रधानमन्त्री हुँदा ३९ वर्षका थिए। न्युजिल्याण्डमा ४० वर्षीया ज्यासिण्डा आर्डेनले शासन गर्दैछिन्। एल साल्भाडोरमा ३९ वर्षका नायिब बुकेले, युक्रेनमा ४२ वर्षका जेलेनेस्कीले देश चलाउँदैछन्। तर, हाम्रो देशमा ५० नाघेकाहरु विद्यार्थी संगठनको नेता हुन प्रयासरत हुन्छन्।
हामी कहाँ आजीवन आफैंले मात्र खाइरहनुपर्ने रोग राजनीतिमा मात्र हाबी भएको होइन। अरु क्षेत्र पनि हेरौं न। निजामती सेवाको विशिष्ठ श्रेणी अर्थात् सचिव भइसकेका महानुभावहरु कार्यकाल नसकिँदै दौडधुपमा लाग्छन्। पेन्सन आउन सुरु नहुँदै कुनै आकर्षक ठाउँमा जागिर पाउन प्रयास गर्छन्। त्यो हुन नसके पदमा रहँदा दाता रिझाएर उनीहरुकै कार्यालयमा कन्सलटेण्ट भएर पुग्छन्। यसरी काम गर्नेले देशको हितमा काम गर्लान् कि दाताको हितमा? किन सोच्दैनौं हामी?
एउटै मानिस आयल निगमको हाकिमदेखि दुरसंचार र वायु सेवाको प्रमुख भएर खान्छन्। के यस्ता सेवामा कुनै विशिष्टीकरण, ज्ञान वा सीप चाहिँदैन? अनि, कसरी सुध्रिन्छन् ती निकाय?
पूर्व मुख्यसचिव र चीनका लागि नेपाली राजदूतबाट हालै फिर्ता बोलाइएका एक जना प्रशासकलाई उदाहरणको रुपमा हेरौं। उनी आफैंमा निकै सक्षम र सम्भवतः विवादरहित प्रशासक हुन्, शंका रहेन। तर, बिर्सिन के सकिँदैन भने, मुख्यसचिव हुँदा वरिष्ठताका आधारमा आफूभन्दा माथिकालाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा पछाडि धकेल्दै उनी मुख्यसचिव भए, ‘रोलक्रम मिचेर म बन्दिनँ’ भनेनन्।
त्यसरी मुख्यसचिव भएर मात्र उनलाई कहाँ पुग्यो र? राजदुत पनि बन्नु पर्‍यो। युवाहरु देशमै बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने उनले, मैले राज्यको उपल्लो निकायमा बसेर सेवा गरिहालें, यसमा अब अर्कोले अवसर पाओस् भन्नचाहिँ नहुने?
यो एक जना व्यक्तिको कुरा मात्र होइन, अरु मुख्यसचिवको पनि उस्तै हालत हामीले देखेकै हो। कोही एडिबीतिर हामफाल्ने, कोही अन्ततिरै ।
वषौंका सरकारी निर्णय हेरौं न, कुनचाहिँ नियुक्तिमा आवेदन मागेर, पारदर्शी ढंगले वा त्यो नियुक्तिमा पर्ने फलानोको फलानो नाता नपर्ने व्यवसायिक, दक्ष मानिस परेको भन्न सकिने अवस्था छ?
नीलाम्बर आचार्यको दक्षता वा निष्ठामा कमैको प्रश्न होला तर के नेपालमा ७५ कटेका ती बाजेबाहेक अरु कोही थिएन, जसले भारतका लागि नेपालको राजदूत चलाउन सकोस? दिल्ली जस्तो संवेशनशील र महत्त्वपूर्ण ठाउँमा उमेर र शारीरिक अवस्थाले हेर्दै टिठ लाग्दा देखिने आचार्यको सट्टा त्रिभुवन विश्वविध्यालयका राजनीतिशास्त्रका कुनै चल्तापुर्ता प्राध्यापकलाई जिम्मेवारी दिँदा के जाँदो हो। अनि आचार्यले पनि म अब बुढो भइसकें अरु कसैले जिम्मेवारी लेओस् भन्न किन नसक्ने?
एकजना परराष्ट्रमन्त्रीले कतै भनेको सुनेको थिएं– ‘लौ न फलानोलाई अरु केही भएन भने एउटा देशको राजदूतमा भए पनि अल्झाइदिनु पर्‍यो’ भनेर दबाब आउँछ। राजदूतको जिम्मेवारीलाई यो रुपमा बुझेपछि हाम्रा प्रतिनिधिले प्रतिस्पर्धाको यो युगमा कस्तो कार्यसम्पादन गर्ने हुन्? त्यसैले त हामीले काबिल कुटनीतिज्ञ होइन, ठूला नेताकी सासु बज्यै, म्यानपावरका दलाल, पार्टीलाई भेटी चढाएका ठूला साहुजीका छोरीहरुलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकाएका छौं।
काठमाडौंमा घर हुने पूर्वराष्ट्रपतिले भाडा नतिरेर घर छाड्ने सार्वजनिक सूचना जारी हुन्छ। त्यसको सट्टामा, चिकित्सक उनले आफ्नै गाउँतिर वा कतै निशुल्क बिरामी हेर्दै भन्ने समाचार पढ्न पाए हुन्थ्यो। राष्ट्रपतिलाई करोडौंका गाडी चाहिने समाचारको सट्टामा एक पटक राष्ट्रप्रमुख र उपप्रमुख भइसकेकाहरु फेरि त्यही पदमा दोहोरिन्नौं, अरु कसैले चलाओस् भन्ने र उनीहरु अहिले समाजसेवामा छन् भन्ने समाचार पढ्न पाए हुन्थ्यो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भइसकेका पूर्वउपराष्ट्रपति आफूले सरकारलाई वर्षौदेखि तिर्नुपर्ने सत्तरी हजार रुपैयाँ उठाउन जाँदा कर्मचारीलाई हप्काएर पठाए रे भन्ने समाचारको सट्टामा कतै कानुन पढाइने विश्वविद्यालयमा कक्षा लिँदै वा कतै गाउँतिर न्याय, कानुन, कर्तव्य वा अधिकारको बारेमा सिकाउँदै भन्ने समाचार पढ्न हामी नेपालीको भाग्यमा नलेखेकै हो?
यही गति अन्य क्षेत्रमा पनि त छ। चाहे त्यो पत्रिकाका सम्पादक हुन् वा बैंकका सिइयोहरु। कहिले कुनमा छिरेको छ, कहिले कुनमा। सेकेण्ड म्यान सधैंको सेकेण्ड म्यान।
देशमा धेरै राजनीतिक क्रान्ति भए, शासन व्यवस्था आमुल परिवर्तन भए तर हाम्रो सोच बदलिएन्। सामाजिक रुपान्तरण हुन सकेन। आम मानिस सधैं रैती नै भइरहने अवस्था आयो। त्यसैले मालिकहरु अघाउलान्, नअघाउलान्, उनीहरुले छोड्लान्, नछोड्लान तर हामीले प्रश्न गर्दै गरौं- मालिक तपाईंलाई अब त पुग्यो कि?
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको स्पष्टीकरण : आवेदकको योग्यता नपुगेकाले दोश्रोपटक विज्ञापन बिहीबार, मंसिर ११, २०७७
भूमिमा रहेको द्वैध स्वामित्व सदाका लागि अन्त्य हुन्छ : मन्त्री अर्याल बिहीबार, मंसिर ११, २०७७
ओली-शृंगला भेट बिहीबार, मंसिर ११, २०७७